Ifulethi enombono - Matka - I-Airbnb
Ifulethi enombono - Matka
Dolna Matka, Greater Skopje, UMntla Makedoni
I-villa entle yeentaba ebekwe eCanyon Matka enombono omangalisayo wendalo esingqongileyo. Lonke uyilo olusendlwini lukunika olo fayile lufudumeleyo kunye nekhaya. Le villa ixhotyiswe ngokupheleleyo lilo lonke ikhitshi, izixhobo zombane, iTV yesatelite, iWiFi yasimahla, isifudumezi samanzi, ukufudumeza okuphakathi kuzo zonke iindawo zendlu kunye neyadi yangaphambili enokuthi isetyenziswe ukosa inyama.
Umbono wokuphefumla uhlala ufumaneka ngefestile nangaliphi na ixesha lonyaka. Kwigumbi lokuhlala, wabelana ngeTV, kunye nebhedi yokumkanikazi kunye netafile yomsebenzi ngombono. Sihlala sikuthanda ukuba imidlalo efanayo izibini, iipuzzle, Picado kwaye sinobuhlobo kwisizukulwana ngasinye. Umhombiso ongaphakathi kwindlu yinkcukacha enyanzelekileyo kwaye engenakuphepheka ukuba sihlala sisongezelela ngeentyatyambo ezintsha ezivela kwigadi yethu.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Indawo ezolileyo enezindlu ezininzi zasekuhlaleni kunye nezindlu zangasese. Ukuphela kwesitrato apho indlu ikhona khona ikhokelela ngqo ehlathini ukuze kungabikho zithuthi.
Iindwendwe zinokusicela nangaliphi na ixesha ukuba ziyayifuna, iiyure zethu zokusebenza zibhetyebhetye, kwaye ngaloo ndlela sinikezela ngethuba lokungena kunye nexesha lokuphuma xa kuyimfuneko kwiindwendwe zethu.